Zụrụ Ọkachamara Detangle Comb Hair Brush - Mbupu Na-akwụ ụgwọ & Enweghị |tụ | WoopShop®
Ọkachamara Detangle Comb Hair Brush
Agba acha uhie uhie na ntutu ojii na ntutu acha ọcha na ntutu pink enweghị ntutu acha akwụkwọ ndụ na-enweghị ntutu ọla edo nwere ntutu acha anụnụ anụnụ na ntutu acha odo odo na ntutu pink na ntutu nwa ọcha
acha uhie uhie na ntutu ojii na ntutu acha ọcha na ntutu pink enweghị ntutu acha akwụkwọ ndụ na-enweghị ntutu ọla edo nwere ntutu acha anụnụ anụnụ na ntutu acha odo odo na ntutu pink na ntutu nwa ọcha
Ọkachamara Detangle Comb Hair Brush - acha uhie uhie na ntutu isi na-azaghachi azụ ma na-ebu ụgbọ mmiri ozugbo ọ laghachiri na ngwaahịa.
Emdị Typedị: Comb
Nọmba nlereanya: C457823
Ọmarịcha ọrụ: hụ ojiji ga-adịte aka.
Kwesịrị ekwesị maka ogologo ntutu isi: obere ntutu na ntutu isi.
Zuru oke maka: iji na salon na ụlọ.
Nhazi arched: mee ọdịdị dị mma.
Nwepu na-enweghị ntụpọ: na-eme ka ọ dị mfe ijide.
Mara: ụdị 2 dị iche iche
Ihe: Bristle + naịlọn + ABS
Ihe eji eme ihe: Rubber
A na-eji bristle na naịlọn mee ntutu isi, dị mfe ihicha.
Ezé ntutu ntutu nwere ike ịhịa aka n'isi gị, na-akwalite uto ntutu gị.
Ejiri roba, nwayọ, ma nwee ntụsara ahụ ka aka ya ji arụ ọrụ.
Ntucha na-enweghị mmịpụta na-eme ka ọ dị mfe ijide.
Ngwurugwu arched na-eme ka ọdịdị ya mara mma.
Ọmarịcha ọrụ rụọ ọrụ na-eme ka ojiji dị ogologo oge.
Kwesịrị ekwesị maka ogologo ntutu isi, obere ntutu, na ntutu isi. 8.P zuru oke maka iji na ime ụlọ na ụlọ.
1 x Hairbrush Comb
Dabere na 35 nyocha
Nnukwu nro dị nro nke ga-arapara na ntutu gị. Emela obi ụtọ site na ịsụ.
Bịara ọsọ ọsọ mgbe ụbọchị iri na isii nke iwu, juputara nke ọma. Nnukwu ahịhịa ogologo na ntutu dị oke egwu, enwere m obi anụrị. Nwere ike ikwu, daalụ
Ihe niile OK
Bụ nnọọ nnukwu. Soft anụ-enyi na enyi isi. Zdziwiłam bụ na ọ isi awọ ihe na-edozi ya abụghị enyo na ọ bụ naanị ụfọdụ plastic matte.
Ọ dị ezigbo mma! Ọnụ ego!